Madaxweyne Muuse Biixi Waxuu Guul Go,aan Ka Gaadhay Qandaraasyadii Musuqa Aha Ee Lagu Naas Nuujin Jiray Shikhsiyaadka Gaarka Ah
Tuesday April, 24 2018 - 17:11:00
Thursday December 28, 2017 - 09:55:56 in by salman abdi
Madaxweyne Muuse Biixi Waxuu Guul Go,aan Ka Gaadhay Qandaraasyadii Musuqa Aha Ee Lagu Naas Nuujin Jiray Shikhsiyaadka Gaarka Ah Madaxweynaha Somaliland
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa qaaday talaabooyin muhiim ah oo uu ku xeerinayo masaalixda guud ee dalkan, kadib markii uu xukuumadiisu hawlo farsamo u hakisay saldhigii millatari ee madaxweyne Axmed Siilaanyo uu dawladda Imaaraadka carabta ka siiyey inay ka samaystaan madaarka magaalo-xeebeedda Berbera badhtamihii sannadkan.
Madaxweyne Muuse wuxuu qaaday 14kii maalmood ee uu xilka hayey, wuxuu dawladda Imaaraadka ku xujeeyay inay hirgeliso mashaariic Somaliland faa’iido u leh oo ku lammaanaa heshiiskaas saldhiga millatari. Mashaariicdaas waxa ka mid ahaa inay dawladda Imaaraadku dhisto jidka hawlbowlaha ah ee isku xidha Berbera iyo magaaladda Wajaale ee soohdinta u dhexaysa Somaliland iyo Itoobiya.
Waxakaloo ka mid ahaa in xukuumadda Isku-tagga Imaaraadku ay dhisto madaar rayidku isticmaalaan oo casri ah, taasi oo ay dawladda Imaaraadku wali bilaabin.
Xukuumadda cusub ee talada waddanka haaneeday, waxay si diblomaasi ah oo feejigan iskugu xidhay bilowga mashaariicdan iyo saldhiga millatari isku xidhan yihiin.
Dadka siyaasadda naaqisha ayaa ku sifeeyey qaraarka Muuse Biixi mid uu Somaliland ugu faa’iidaynayo oo uu dib ugu gorgortamayo wadahadalkii wayda ahaa ee xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo ay hubsiimo la’aanta ku gashay.
Waxa kaloo madaxweyne Muuse lagu bogaadiyey inuu baadhis geliyay dhammaan qandaraasyo xukuumaddii ka horreysay ay shirkado gaar ah siisay oo cid gaar ah lagu naasnuujinayey oo inta ugu badan uu ka dhex muuqdo wiilka madaxweynihii hore soddogga u yahay ee awoodda maamulka saamaynta weyn ku lahaa.
Qandaraasyada tooshka xukuumadda madaxweyne Muuse tooshka ku shiday durba, waxaa ka mid ah qandaraas madmadow ku jiro oo shaybaadhka (Laabka) tayada shiidaalka lagu baadho oo Baashe Moorgan uu saami ku leeyahay.
Waxaa qandaraasyadan la baadhayo soo dhaweeyey dadkii xog ogaalka u ahaa daahfurnaan la’aantooda iyo xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo ku bogaadiyay madaxweynaha go’aanka uu ka qaatay qandaraasyadaas su’aashu ka taagan tahay.
Guddoomiye Ku-xigeenka kowaad ee xisbiga UCID, Cabdi-naasir Muxumed Buuni, ayaa xukuumadda cusub ku taageeray fatashaada dhaqdhaqaaq kasta oo lagu baadhayo masuqmaasuq, waxaannu yidhi; "Ka xisbi ahaan annagu xukuumadda waxaanu bogaadinaynaa in musuq maasuqa lala dagaalamo.. Laakiin waxaanu diidanahay in mashruuc kastoo saxsanaa inta la hoos geliyo mid khaldan, ee la doonayo in la baadho, in la yidhaahdo cid baa loo jeedaa. Taasi ma soconayso, wax kastoo sifo khaldan ku baxay waa in la baadho, waa in loo tudho dalkeenan musuqu aafeeyay, abaaruhu aafeeyeen, sicir-bararku aafeeyay.”
Ugu dambayn, waxaanu leenahay madaxweyne hore u soco oo ha u jixin-jixin cid kasta oo tuhun musuqmaasuq galo oo la siiyey qandaraasyo lagu naaxinayey ashkhaas kooban.
Canada:-10 qof oo ku dhimatay gaari lagu jiirsiiyay Toronto
24/04/2018 - 10:12:41
Hargeisa:- Golaha Guurtida Oo Shaqadii Ka Joojiyey Xildhibaan Ka Qeyb Galay Munaasibad Dhaqan Oo Ka Dhacdey Maamulka Puntland.
Caalamka:-Hogaamiyihii Serbiyiiinta Boosniya Oo Racfaan Ka Qaadanaya Xukunkii Lagu Riday
23/04/2018 - 11:14:54